Shiinaha BIBO Soo-saaraha Crystal iyo Alaab-qeybiye | Dien
Qaab dhismeedka Crystal: Monoclinic ， Barta kooxda 2
Halbeegga Lattice: Monoclinic ， Barta kooxda 2
Barta Dhalaalka: Monoclinic ， Barta kooxda 2
Mohs adkaanta: 5-5.5
Cufnaanta: 5.033 g / cm3
Isugeynta Fidinta Kuleylka: =a = 4.8 x 10-5 / K, =b = 4.4 x 10-6 / K, =c = -2.69 x 10-5 / K
BiB3O6 (BIBO) waa muraayad casri ah oo casri ah oo la soo saaray. Waxay leedahay isku-dheellitirnaan aan badnayn oo wax-ku-ool ah, xaddiga dhaawaca sare iyo firfircoonida marka loo eego qoyaanka. Isugeyntiisa aan tooska aheyn waa 3.5 - 4 jeer ka badan tan LBO, 1.5 -2 jeer ayaa ka sarreysa tan BBO. Waa muraayad rajo leh oo soo saareysa si loo soo saaro laser buluug ah.
BiB3O6 (BIBO) waa nooc aad u fiican oo aan toos ahayn oo loo yaqaan 'Crystal Optical Crystal'. NLO Crystals BIBO Crystals waxay leedahay iskudhaf ballaaran oo aan qummanayn, sifooyin horumarsan oo ballaaran oo loogu talagalay dalabka NLO ee daahfurnaanta ballaaran ee 286nm ilaa 2500nm, marinka dhaawaca sare iyo firfircoonida marka loo eego qoyaanka. Isugeyntiisa aan tooska aheyn waa 3.5-4 jeer oo ka sareeya tan LBO crystal, 1.5-2 jeer ka badan tan BBO crystal. Waa muraayad laba-laab leh oo rajo leh inay soo saarto leysarka buluuga ah 473nm, 390nm.
BiB3O6 (BIBO) ee SHG waa mid aad u badan, gaar ahaan kuwa aan tooska ahayn ee BIBO Crystal Second generation harmonic at 1064nm, 946nm iyo 780nm.
Muuqaalka noocan ah ee indhaha Crystal BIBO Crystal waa sida soo socota:
Isugeyn wax ku ool ah oo SHG ah (qiyaastii 9 jeer tan KDP);
Firfircoonaanta la xiriirta qoyaanka.
SHG ee awooda dhexe iyo sare Nd: lasers at 1064nm;
SHG ee awooda sare Nd: lasers at 1342nm & 1319nm oo loogu talagalay laser cas iyo buluug ah;
SHG ee Nd: Lasers-ka 914nm & 946nm ee leysarka buluuga ah;
Codsadayaasha Qiyaasaha Muhiimka ah (OPA) iyo Oscillators (OPO).
Qaab dhismeedka Crystal Monoclinic ，Kooxda dhibic 2
Halbeegga Lattice a = 7.116Å, b = 4.993Å, c = 6.508Å, β = 105.62 °, Z = 2
Barta Dhalaalka 726 ℃
Cufnaanta 5.033 g / cm3
Isugeynta Ballaarinta Kuleylka =a = 4.8 x 10-5 / K, =b = 4.4 x 10-6 / K, =c = -2.69 x 10-5 / K
Range Transparency 286- 2500 nm
Isku dheelitirnaanta Nuugista <0.1% / cm 1064nm
SHG ee 1064 / 532nm Xagalka iswaafajinaya wejigiisa: 168.9 ° laga bilaabo dhidibka Z ee qorshaha YZ Deff: 3.0 +/- 0.1 pm / VAngular aqbalaadda: 2.32 mrad · cm Xagasha ka bixitaanka: 25.6 mrad Qiyaasta heerkulka: 2.17 ℃ · cm
Dhidibka jirka X∥b, (Z, a) = 31.6 °, (Y, c) = 47.2 °
Furitaanka furan dhexe 90% dhexroor
Xadka burburka [GW / cm2] > 0.3 ee 1064nm, TEM00, 10ns, 10HZ